2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep ma di egwu: WM ọzọ 5 maka Linux | Site na Linux
Continuga n'ihu n'usoro akwụkwọ anyị na Njikwa Window (Ndị njikwa Windows - WM, na Bekee), taa anyị ga-enyochakwu ntakịrị ihe mbụ 5 WM n’ime ha, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ ndị dịnụ.
Akwụkwọ a na ndị na-esonụ ga-enwe nzube nke ịkọwa akụkụ ya ndị dị mkpa, dị ka ndị n'ime ha arụ ọrụ (arụ ọrụ) ma ọ bụ rụọ ọrụ na-adịghị arụ ọrụ (mmepe kwụsịrị), olee ụdị ha bụ, gịnị bụ nke ha njirimara bụ isi, na ụfọdụ, kedu ka esi etinye ha, n’akụkụ ndị ọzọ. Na mgbakwunye, iji nye ohere nnweta ọbụlagodi nchịkọta dị mkpirikpi na Spanish, dị ka ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ ha kachasị n'asụsụ Bekee.
O kwesiri icheta na ndepụta zuru ezu nke ndị nwere onwe ha na Window Managers enwere ike ịchọta nke a na post anyị ọzọ:
Ọnụ na Dabere na ndị njikwa windo nke a Specific Desktop Gburugburu. Na mgbakwunye, kwuru akwụkwọ gara aga na-enyekwa ohere ịnweta akwụkwọ niile gara aga na Desktọpụ Gburugburu tụlere n'elu.
"WM ngwa ngwa na-ese n'elu mmiri, yana ihe dị iche iche nke ịnwe 2 n'ọnụ, edere na ọbá akwụkwọ XCB ma nweta ya MCWM nke Michael Cardell dere. Na 2bWM enwere ike ịnweta ihe niile site na keyboard, mana enwere ike iji ngwaọrụ na-atụ aka ịkwaga, gbanwee ma kwaga / ala. WARDỌ AKA NA NT:: Nke a WM na ebe nchekwa a bụ nnwale, 2bwm ezubere maka ndị ọrụ dị elu".
Ọrụ ngo: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ na ọnwa 2 gara aga.
Ọ na-enye arụmọrụ nke "Teleport windo" na nkuku, na etiti na iji kpuchie etiti nyocha.
Tinye ihe ojoo na nyochaa.
Na-enye gị ohere ịba ụba na / ma ọ bụ kewaa obosara ma ọ bụ ịdị elu nke windo site na 2.
Ọ na-eme ka ọ dịkwuo mfe ibelata ma ọ bụ buo windo windo ahụ ma na-echekwa akụkụ ahụ.
Na-eme ka ọ dị mfe ịkwaga ma ọ bụ megharịa windo na ọnụọgụ abụọ akọwapụtara onye ọrụ.
Ọ na-etinye 2 oke ala a haziri ahazi nke gosipụtara ọkwa nke windo ahụ.
Ọ bụ otu n'ime obere WMs kacha arụ ọrụ na nha na nchekwa nchekwa.
Ọ naghị eji ogwe osisi ma ọ bụ ogwe ọ bụla abịa, mana ọ na-asọpụrụ ọrụ _NET_WM_WINDOW_TYPE_DOCK nke windo, ma na-eleghara ha anya, yabụ imirikiti ogwe na ndị ọrụ kwesịrị ịrụ ọrụ, dị ka, cairo-dock, fbpanel, hpanel, lxpanel , tint2, xfce4-panel na Ogwe mmanya na dzen2.
"Onye njikwa windo X11 sitere n'ike mmụọ nsọ nke atụmatụ 9 8½ window, makwaara dị ka rio. Ọ na-enye a dị mfe ma dị ọcha ọrụ interface. Ọ bụ ụdị "pịa-na-azụ". Na-eji Xont font usoro (nke dị mwute ikwu na enweghị nkwado maka Unicode)".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ọrụ ikpeazụ karịa afọ 2 gara aga.
Ọ na-adịghị enye virtual desktọọpụ, customization, isi bindings, EWMH nkwado, ma ọ bụ compositing.
Ọtụtụ ndị na-eji koodu ya amalite mmepe nke njikwa windo site na ncha.
A na-ekesa ya n'okpuru ikikere site na MIT.
Na-elekwasị anya (nọ n'ọrụ) windo na-egosi ókèala ojii. Ma òké na keyboard ihe na-aga na windo a lekwasịrị anya. Pị bọtịnụ òké ekpe na windo na-enweghị mgbado anya (oke ọcha) na-eweta ya n'ime elekwasị anya.
Site na bọtịnụ ziri ezi ebe ọ bụla na-abụghị windo elekwasị anya, ọbụlagodi na windo ọ bụla na-enweghị mgbado anya, ọ na-egosipụta menu nke na-enye ohere n'etiti ihe ndị ọzọ, wepụta xterm ọhụrụ, gbanwee windo, megharịa, mechie ma ọ bụ zoo windo
A na-ahụkarị WM ochie a n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu «9wm»Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Onye njikwa windo dị ntakịrị maka X11. O nweghi njiri mara nma obula, mana onwere onwu na ihe di nfe. Okwesiri ibu ezi ihe ntinye aka nke ICCCM. A gụnyere mmemme dị iche iche ole na ole iji jikwaa mmemme na-agba ọsọ, gbanwee n'etiti windo, n'etiti omume ndị ọzọ".
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ihe ikpeazụ emere n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri na ise gara aga.
Enye ohere stacking windo na window decorations gụnyere ala na aha mmanya. Ọzọkwa, mmanya isiokwu nwere bọtịnụ meta.
Ọ na-enye windo nwere oke "enweghị isi", soro ụzọ windo site na "No autoraise", wee malite mmemme site na modulu "aemenu".
Edere ya na C, jiri xaw ma ọ bụ gtk toolkit, ma nwee obere ihe eji emepụta ihe.
O nweghi Ogwe NchNhr, nkwado maka otutu desktọọpụ, Ihe Oyiyi Oyi, Akwụkwọahụaja, Gburugburu na ohere nke windo jikọtara ọnụ.
Enwere ike ịhazi ya site na faịlụ nhazi, ọ dị fechaa ma chọọ oke bọtịnụ 3 maka ịrụ ọrụ kacha mma.
A na-ahụkarị WM ochie a n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu "awm"Ya mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Onye njikwa windo maka sistemụ windo Unix X. Na mbụ dabere na ọdịdị na ihu nke NeXTStep interface, ọ na-enye ndị ọrụ njedebe nwere desktọọpụ na-agbanwe agbanwe, dị ọcha ma mara mma. Ihe mgbaru ọsọ nke AfterStep mmepe bụ inye mgbanwe na desktọọpụ nhazi, rụọ aesthetics na oru oma eji usoro ihe onwunwe.
Agaghị arụ ọrụ: Achọpụtara ihe ikpeazụ mere obere ihe karịrị afọ asaa gara aga.
E jiri ya tụnyere WM ndị ọzọ, ọ nwere obere ojiji nke akụ, ma nwee ezigbo nkwụsi ike na nhazi.
Edere ya na C ma jiri akụrụngwa GTK. Ọzọkwa, ọ dabere na Perl na Imagemagick.
Ihe ndozi windo gụnyere ókèala na ogwe aha. Ogwe aha nwere bọtịnụ maka menu, belata, bulie, ma mechie. Enwere ike igosi ngwa ndị na-arụ ọrụ na ogwe ọrụ.
Ọ gụnyere nkwado maka ọtụtụ desktọọpụ na desktọọpụ ịgbanwee site na modul paging.
A na-ahụkarị WM ochie a n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha afterstep ngwugwuYa mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
"Onye njikwa windo wuru na nhazi usoro ọgbọ ọzọ maka X Windows. Ọ dị oke ọsọ, gbasaa, ma bia n'okpuru ikike GNU GPLv2. A na-elekwasị anya ya na ndị ọrụ dị elu, ndị mmepe na onye ọ bụla na-emekọ ọrụ mmemme kwa ụbọchị ma chọọ inwe njikwa zuru ezu banyere gburugburu ebe obibi ha.
Ọrụ ngo: Achọpụtara ihe ikpeazụ emere n’ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ afọ iri na ise gara aga.
Ọ bụ WM zuru ezu ma sie ike na-enye gị ohere ịgbanwe n'etiti ụdị "Tiling" ma ọ bụ "Stacking".
Ọ na-ekwe ka njikwa zuru oke site na òké ma ọ bụ kiiboodu site na usoro "callback" nke njirimara onye ọrụ.
Ihe ịchọ mma nke windo gụnyere ókèala na ogwe aha, yana ogwe aha nwere akara ngosi na bọtịnụ iji belata, bulie, ma mechie. Ọzọkwa, oghere windo dị warara (ihe dị ka pixel 1 n'obosara).
Edere ya na C, nwere nkwado multiscreen site na xinerama na desktọọpụ desktọọpụ na-enye ozi ọkwa na nkwado maka wijetị omenala.
WM a dị ugbu a na-ahụkarị n'ọtụtụ ebe dị iche iche GNU / Linux Distros, n'okpuru aha ngwugwu di egwuYa mere, dabere na njikwa ngwugwu ejiri, eserese ma ọ bụ ọnụ, enwere ike itinye ya ngwa ngwa. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara WM ndị a njikọ.
Anyị na-atụ anya nke a "bara uru obere post" banyere ndị mbụ a 5 «Gestores de Ventanas», n'adabereghị na nke ọ bụla «Entorno de Escritorio», akpọ 2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep ma di egwu, nwee nnukwu mmasị na ịba uru, maka ihe niile «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» na nke onyinye dị ukwuu na mgbasa nke obibi dị ebube, gigantic na eto eto nke ngwa nke «GNU/Linux».
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » 2BWM, 9WM, AEWM, Afterstep ma di egwu: WM ọzọ Alternative maka Linux